Nikaragoa: Vaovao Farany Ao Amin’ny Twitter Momba Ireo Mpanao Politika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Jona 2017 4:00 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, македонски, English
Tao amin'ny kaonty Twitter’ny Sekretera Jeneralin'ny Firenena Mikambana Ban Ki-Moon:
Mihaona amin'Andriamatoa Escoto Brockmann ao Nikaragoà, Filoha voafidy tamin'ny fivoriamben'ny [Firenena Mikambana] faha-63.
Misaotra ny Twitter satria fatantsika ankehitriny ny fihaonan'i Ban Ki-Moon tamin'ny masoivoho Nikaragoàna, Miguel d'Escoto, pretra teraka tao Etazonia sy tao anatin'ny hetsika Teolojian'ny Fanafahana tao Amerika Latina ary lasa mpiara-dia amin'ny Sandinista mangingina nandritra ny taona 70. Notendrena ho minisitry ny raharaham-bahiny tao Nikaragoà izy nandritra ny taona 1980s. Voafidy ho Filohan'ny Fihaonamben'ny Firenena Mikambana mandritra ny herintaona izy vao haingana, hanomboka hiasa amin'ny volana Septambra. Araka ny filazan'ny Wikipedia, nilaza teny fohy izy rehefa avy voafidy, ::
“Manantena aho fa ny fiadidiako dia hiresaka izay nanjary tabataba rehetra manerana izao tontolo izao ho amin'ny demaokrasian'ny Firenena Mikambana. Mampanantena hanome fanohanana feno ho an'ny vondron'asa amin'ny famelomana indray ny Fihaonambe aho”.
Tena mampihomehy ny mijery ny fomba nahitan'ny Nikaragoàna ity fihaonana ity …tao amin'ny twitter!! Ny vondrom-piarahamonina Twitter Nikaragoa, Twittnic [es] naneho hevitra momba ity ampaham-baovao mahaliana ity ary nanontany tena hoe iza koa ireo olo-malaza ara-politika hafa tahaka izany mety hampiasa ity fitaovana malaza ity:
Hitanao ankehitriny, mampiasa Twitter ny Firenena Mikambana. Tahaka ny ahoana ny Twittern'ny filohantsika? Na ireo mpanao lalàna ao amintsika???
@danielortega: Hijery ny an'i Chavez
@arnoloaleman: FITSAPAN-KEVITRA TWITTER: Aiza aho no tokony hisakafo androany? (manondro ny fitsidihan'ireo mpanao fihetsietsehana vao haingana)
@eduardomontealegre: raha managadra ahy izy ireo, dia managadra an'i Nikaragoà
@ElCheleGrisby: @eduardomontealegre TENA TSY MENATRA IANAO! (ElCheleGrisby dia William Grisby, mpaneho hevitra amin'ny radio avy ao Sin Fronteras, Radio La primerisima, mpitsikera goavana an'ireo mpanao politika elatra ankavanana sy ankavia ao Nikaragoà)